Alatsinainy 24 Jiona 2019. – FJKM
Mahagaga antsika hatrany ny fitondran’ny Tompo an’ i Paoly
1-I Paoly nenjehina fa Apostolin’ny Jentilisa (and 27-30)
Efa tsy vaovao amin’izany intsony izy fa efa azo lazaina ho vita vaksiny amin’ izany mihitsy . Teto ny antony nanenjehana azy dia ny fiarahany tamin’ ireo Jentilisa (tsy Jiosy) nambara fa nandoto ny fitoerana masina , na dia tsy marina aza izany . Mety ho tratran’ny fanendrikendrehana toy izany koa ianao , fa mahereza.
2-I Paoly novonjen’ny miaramila (and31-36)
Ny fahatongavan’ny miaramila Romana no tsy nahafaty azy , na dia romotra te-hanompo azy aza ny Jiosy. Mahazo matoky koa isika fa hain’ Andriamanitra ampiasaina ny mpitandro ny filaminana hanampy antsika mpitory ny Filazantsara .
3-I Paoly sahy miteny fa tsy mangina (and37-40)
Raha heverina ny hoe : zara aza tsy matin’ny olona teo ,dia hoe ny mangina no mety . Tsy izany anefa no nataon’i Paoly , fa mbola nangataka hiteny amin’ny vahoaka ihany izy. Tena hita ara-bakiteny mihitsy izay voalazany tao amin’ny Asa 20.24 hoe : « Tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko …hanambara ny Filazantsaran’ny fahasoavan’ Andriamanitra »